Iphrofayela Inkampani - Mic Optoelectronic Co., Ltd
MIC CO OPTOELECTRONIC., LTD
150 izifunda kanye ezifundeni kuhlanganise eYurophu, eMelika, e-Oceania, e-Afrika, eNingizimu-mpumalanga Asia, eMpumalanga Ephakathi Japan
Kusukela kwamiswa brand MIC ethu LED, nge R eqinile & D umthamo, professional ithimba nesipiliyoni ocebile embonini, thina ukwethula imikhiqizo emisha ngale ukulindela amakhasimende 'minyaka yonke, okuyinto njalo ahole umkhakha mkhuba. Nge share emakethe alawula China, ukumaketha inethiwekhi yethu inwetshelwe izifunda kuka-150 futhi izifunda kubandakanya izindawo zaseYurophu, eMelika, e-Oceania, e-Afrika, eNingizimu-mpumalanga Asia, eMpumalanga Ephakathi Japan. Ngenxa amandla ethu ehlukile nezinamba ukukhanyisa amaphrojekthi yimpumelelo emhlabeni wonke, siye ukuthola idumela ukudunyiswa kwakho-efanelekayo ziye ubhekwa amakhasimende domestically futhi emhlabeni jikelele.
MIC CO OPTOELECTRONIC., LTD eyasungulwa ngo Dec 2006, ngokukhethekile-R & D, ukukhiqiza kanye marketing emkhakheni LED imikhiqizo ukukhanyisa futhi idunyiswe njengoba National Hi-tech Enterprise, i-Enterprise Shenzhen Phezulu uphawu China Advanced Enterprise e Evumelanayo Labour Relations. Thina ngokuzimela ukuklama futhi sikhiqiza imikhiqizo LED ezisukela High Power LED Street Light, High Power LED Umhubhe Khanyisa, LED Ummbila Khanyisa, LED High Bay, LED Down Khanyisa, LED Tube Light kuya komunye izibani LED, afaneleka sibe omunye ngobukhulu abakhiqizi, abahlinzeki kanye abathuthi ukukhanyisa LED kanye lights solar eChina, kanye umhlinzeki ohamba phambili e izixazululo energy esisindisa.
Thina wahola ekuhleleni nasekukhuthazeni ukubekwa kokuba igunyazwe yi-ISO9001 Quality Management System kanye ISO14001 Environmental Management System Semiconductor ukukhanyisa umkhakha yaseChina asigcini bahlanganise izimiso zemboni ngoba LED Street Light, LED Ummbila Khanyisa, LED Tube Ukukhanya LED Flood Khanyisa nokunye kodwa futhi ganyela ekwakhiweni kweluhlaka lwetinhlelo izindinganiso nezinye izimboni. Imikhiqizo yethu ukukhanyisa ibanga ziye ewina isitifiketi kusuka, yesifundazwe, izinhlangano zikazwelonke kamasipala onegunya futhi uchungechunge ezinye kuhlanganise LED Street Light, LED Umhubhe Khanyisa, LED Tube Ukukhanya LED Down Khanyisa eziqinisekiswe nge CCC, CQC, CE, RoHS, UL , SABS, ETL futhi PSE.
Quality Ukuqamba Ubuqotho Izikhungo
Ukunamathela ibhizinisi ifilosofi yethu 'izinga, emisha, ubuqotho kanye service' futhi eliqhutshwa emakethe uphoqe amakhasimende ', thina njalo sokukhomba nganoma ngokunikeza amakhasimende nge ephephile, imvelo-friendly, amandla ukulondoloza, imikhiqizo high kanye nezinsiza engcono. Beqhutshwa emisha okuqhubekayo kanye ngcono, sizibophezele sizama ukuqaphela umgomo wethu ezinkampani "Ukukhanya emhlabeni".